Nke a bụ ọkwa dị egwu nke NES Classic Mini | Akụkọ akụrụngwa
Nke a bụ ọkwa dị egwu nke NES Classic Mini
NES Classic Mini, ihe njikwa ga - eme ka anyi laghachi eighties na igba agba, di ebe a. Ọfọn, n'ezie ọ na-abịa, karịa ọ ga-abụ na Nọvemba 11. Ka ọ dị ugbu a, anyị nwere ike ịme ndapụta ma jiri aka azụmaahịa na foto gị kpochapụ aka anyị. Ochie na-ere karịa mgbe ọ bụla n'ụwa nke egwuregwu vidio, Ntughari na Ntughari nke aha ọ bụla dị egwu nke oge gara aga dị ugbu a. Ugbu a, anyị hapụrụ gị ọkwa dị egwu nke NES Classic Mini, vidiyo mgbasa ozi na-aga nke ọma dị ka na mbụ, nke na-akpọ gị ka ị debe ya na nke ugbua.
Ikekwe adababeghị mgbasa ozi ahụ, mana nke bụ eziokwu bụ na ọ na-akpata oge ahụ gara aga, mgbe anyị hụrụ NES na telivishọn, yana console ATARI, yana tupu mgbawa nke egwuregwu vidio ahụ ga-ejedebe na nde mmadụ mbipụta nke "ET - The Extraterrestrial" na ọzara Alabama. Mgbasa ozi ahụ na-akpali mmetụta asatọ ma na-emetụ ihe anyị ga-ahụ na njikwa ahụ, ọkụ neon na obere igwefoto, yana ebumnuche bụ isi nke icheta NES Classic Mini bụ njikwa nke anyị agaghị echere.
Dị ka ị maraworị, ụgwọ mmalite ga-abụ € 59,99 na Spain, na njikwa ga-enwe njikọ USB iji nye ya ike. Nke bụ eziokwu bụ na egwuregwu yiri ka ọ na-emegharị nke ọma karịa HDMI, nke anyị chetara bụ njikọ Nintendo maka NES Classic Mini. N'aka nke ọzọ, ọ ga-abịa na otu njikwa, aka nke abụọ ga-efu .9,99 XNUMX ma anyị ga-azụ ya iche, dị ka nkwụnye ọkụ, njikwa ga-eweta USB naanị. Enwere m olileanya na ị kwadebere, na Actualidad Gadget a ga-enwe nyocha na mkpịsị aka nke ịma mma a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Videogames » Nke a bụ ọkwa dị egwu nke NES Classic Mini
Pokémon GO na-ekpughe ndị isi otu na akụkọ abụọ dị mkpa ga-abata na afọ ndị na-abịanụ
Na ngwa a, ị gaghị agbaghara Poké Ball na Pokémon Go